UNHCR oo Wasaarado ka mid ah Xukuumada Puntland ku wareejisay gaadiid+Sawiro – SBC
UNHCR oo Wasaarado ka mid ah Xukuumada Puntland ku wareejisay gaadiid+Sawiro
Hayada UNHCR ayaa maanta waxaa ay gaadiid ku wareejisay qaar kamid ah wasaarada Puntland
Gaadiid oo ka koobanaa afar gaari waxaa ay ahaayen nooca loo yaqaano landcruser waxana hayadu ugu talagashay wasaarada ah amniga ,arimaha gudaha ,cadaalada iyo wasaarada qorshaynta .
Munaasabada gaadiidka lagu wareejiyey oo ka dhacday wasaarada qorshaynta waxaa ka soo qayb galay madaxda UNHCR Puntland iyo qaar kamid ah madaxda wasaaradaha,
Wasiirka wasaarada cadaalada Puntland C/khaliif Xaaji Xasan Ajaayo oo hadal kooban jeediyey ayaa sheegay in uga mahad celinayaa UNHCR gaadiidka ay ku wareejiyeen isla markaana ay ku qaban doonaan howlihii loogu talagalay UNHCRna Puntland ay ka wado howlo balaaran oo ay ka midyihiin in ay caawiyaan barkacayaasha iyo qoxootiga.
Bruno geddo oo ah madax UNCR Puntland ayaa sheegay in afar gaari ku wareejinayaan wasaaradaha qorshaynta ,cadaalada ,amniga iyo arimaha gudaha Puntland waxaana uu intaa ku daray in ay Puntland howlo badan ka qabtaan iyagoo caawiya barkacayaasha ,qaxootiga waxaana isla markaana UNHC ay howlokale oo dhanka hor umarka ah samaysay Puntland sida 60wariye oo ay tababareen iyo xarumo police uu u sheegay in ka dhisayaan boosaaso iyo burtinle iyo tababaro loo sameeyey shaqaalaha dowlada.
Markii ugu horaysay oo Hayada UNHCR ay wasaaradaha Puntland ku wareejiso gaadiid ay ugu talageen ay fududeeyaan howlaha wasaaradahaaso.
Waa wax wanaagsan in ay helaan gar gaar ugayimaada hayada UNHCR. SBC Tv bay lahaan jirtay wali majiraa mise wuu baaba,ay? Hadii uu jiro xagee laga daawan karaa?? Saxaafada Puntland aad iyo aad bay uga dambaysaa caalamka oo dhan gaar ahaan somalida. SBC waxa ay ahaan jirtay idaacadaha ugu wanaagsan sanadadii 2003-4-5-6 Kadib meel ay ku dambaysay mamaqal halka laga rabay in ay horay u socoto. HRM ayaa lamid ah oo iyadana dib u dhac wayn kuyimi. Fadlan tayada idaacadaha kor uqaada. Mowliid oo ka shaqayn jiray SBC waxan islahaa wagii hore waxa uu mus´tqabal ku leeyahay Idaacadaha waa wayn lakinse odaygu horay uma socon ee meeshii buu gadaal uga dhacay. Cabdiqadir Nuunow in uu u shaqeeyo baan maqlay VOA laakinse waxa kaga hormaray dhanka hogaaminta idaacadaha gabdhihii shalay tagay idaacada. waxayna taasi kutusinaysaa in idaacadaha ka howl gala Puntland ay aad u hooseeyaan.
MASHALAAAAAAAA SBC TV MAXAAKUDHACAY WAA IN HAWADA LASOOGALIYAAAAAAAA MAXAADIB IDIIDHIGAY
aad iyo aad baan sbc ugu mahadcelinaynaa dhamaan dadka somaliyeed waxay isku dayaan in u gudbiyaan dhacdooyinka somaliya meelkasta ha ka dhaceene marka idaacad gaarta SBC PUNLAND kuma taal mark asxaabay ishawararka caalamka weeye ayaan dhihi karnaa sbc ee yaan la afla gaadhayn dhalinyaro howl kar ah ayaa ka shaqaysa dhamaan xarumaheeda ooo dhan sxbayaal sbc guul baan u rajaynayaa